HomeWararka CiyaarahaManchester United oo la soo Xiriirtay Weeraryahanka Benfica Darwin Nunez.
May 24, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay xiriir la sameysay kooxda Benfica si ay ugu suurtagasho saxiixa Darwin Nunez suuqa kala iibsiga ee soo socda.
Nunez, oo Benfica kaga soo biiray Almeria 2020, ayaa soo jiitay indhaha kooxo badan oo Yurub ah ka dib markii uu dhaliyay 26 gool 28 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Chelsea , Paris Saint-Germain iyo Real Madrid ayaa dhamaantood lagu soo waramayaa inay xiiseynayaan 22 jirkaan, laakiin sida laga soo xigtay Daily Mirror , Manchester United ayaa durba xiriir la sameysay Benfica iyo wakiilada Nunez.
Weeraryahanka ayaa lagu soo waramayaa in lagu heli karo 60 milyan oo euro (£50.6m), United ayaa doonaysa in ay xiddiga reer Uruguay keento Old Trafford si ay weerarka uga taageeraan Cristiano Ronaldo .
Si kastaba ha ahaatee, la’aanta kubbada cagta Champions League ayaa caqabad ku noqon karta Red Devils, iyadoo Nunez la sheegay inuu aad u doonayo inuu xilli ciyaareedka soo socda ka qayb galo tartanka kooxaha Yurub.
Haddii weeraryahanka uu ka tago Benfica xagaaga, waa uu tagi doonaa ka dib markii uu dhaliyay 47 gool 84 kulan oo uu u saftay kooxda tartamada oo dhan.